XOG RASMI AH+DAAWO: Ma dhab-baa in ay DF Soomaaliya doonayso in ay wada hadal kala gasho Somaliland, Arrimaha gobalka Sool oo ay isku hayaan Puntland & Maamulka Hargeysa? – Puntlandtimes
XOG RASMI AH+DAAWO: Ma dhab-baa in ay DF Soomaaliya doonayso in ay wada hadal kala gasho Somaliland, Arrimaha gobalka Sool oo ay isku hayaan Puntland & Maamulka Hargeysa?
May 27, 2018 W LAASCAANO
MUQDISHO(P-TIMES)- Dabagal warareed ay sameysay Puntlandtimes oo shabakad inta badan la socota arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ayaa ogaatay jiritaanka wada hadal uu garwadeen ka yahay Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo kuwajahan arrimaha gobalka Sool, oo dhexmaraya dawladda Faderaalka Soomaaliya & Maamulka gobalada Waqooyi Galbeed ee Soomaaliya.
Xogta ay heshay Puntlandtimes oo ay sirasmi ah uga heshay Xaafiisyada Madaxweynaha, Ra`iisulwasaaraha & Gudoomiyaha Aqalka Sare waxay cadeynayaan in Madaxweynaha Soomaaliya uu khadka telfoonka kula hadlay Horjoogaha Maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ay ka wada hadleen sidii taabagal looga dhigi lahaa qorshahan.
Gudoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo wada-hadalsiinta door weyn ka qaatay ayaa Madaxweyne Farmaajo ka dhaadhiciyey in colaadda Tukaraq lagu dhameyn karro oo kaliya in wada hadal lagala yeesho Somaliland, maadaama ay tahay cidda wax tabanaysaa Somaliland, taas oo ah mid uu garab iyo gaashaan ku siinayey maamulka uu ka soo jeedo.
Sarkaal sare oo katirsan Xaafiiska Ra’iisulwasaaraha kana gaabsaday magaciisa ayaa u sheegay Puntlandtimes.com in uu labo goor Xasan Cali Kheyre telfoon ku wada hadleen 14-kii iyo 16-kii Muuse Biixi Cabdi oo ay ka wada hadleen arrimaha ku saabsan colaadda Tukaraq, lana diyaarinayo qorshaha wada hadal deg deg ah oo ka furmaya dalka Jabuuti.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo ay wada hadal telfoon yeesheen Muuse Biixi & Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayay isku raaceen in la dadajiyo wada xaajoodyada, lagana dhigo bisha June dhamaadkeeda, taas oo ka dhigan in arrimaha laga hadlayaa ay ka mid tahay xiisadda Tukaraq.
Puntland warsaxaafadeed ka soo baxay ayaa lagu cadeeyey in aysan Dawladda Faderaalku waxba xaq ah u laheyn in ay ka hadasho arrimaha muranka kala dhaxeeya Somaliland, dhul Puntlandna aysan bixin Karin dawladda Faderaalku, taas oo marqaati cad u ah in ay Madaxtooyada Soomaaliya damacsan tahay qorshe xaaladda uga sii daraya.
18 February 2018, Wafdi ka socday oo tagay Hargeysa si arrintan ciidamada Somaliland looga saaro deegaanka Tukaraq, si cad ayuu Afhayeenka baarlamaanka Somaliland Baashe Maxamed Faarax ugu sheegay in ay ciidamadooda la baxayaan marka uu dhaco wada hadalka ay la leeyihiin dawladda Faderaalka, taas oo maanta markale banaanka u soo baxday.
Wixii ka dambeeyey 14-kii bishan si cad ayuu usoo shaac-baxay qorshe u muuqda mid lagu burburinayo Nidaamka Faderaalisimka ee Soomaaliya, kaas oo ay wada fulinayaan Somaliland iyo dawladda Faderaalka, gaar ahaana Xiisadda Tukaraq waxay yeelatay waji ka gedisan sidii ay ku bilaabatay, waxaana banaanka u soo baxaya in wadamada gobalka iyo dawladda Faderaalkuba ay xooga saarayaan in wada hadalka Muqdisho & Hargeysa lagu soo dhaweeyo xiisadda gobalka Sool.
Mid kamid ah Xildhibaanada baarlamaanka Faderaalka ee laga soo doorto Puntland oo ay la hadashay Puntlandtimes.com ayaa siddan ugu soo koobay ka jawaabida arrintan socota ”Shacabka & Dawladda Puntland waxaa la gudboon in ay si feejigan u dhuuxaan arrimaha siyaasiga ah ee hadda socda, ayna goor hore qaatan go`aamo masiiri ah oo ay kaga hortagayaan duulaamada qorsheysan ee qaarkood ay hadda bar bilowga taagan yihiin” ayuu yiri mudanahan baarlamaan.
Hadiiiii maaantay tukaraq gorortan laguu galoo barinaaa garoowe ku xigtaa cadbi wali gaas waxaan kulatalinyaa waa inuusan dawlda Somalia iyo cidkastaa oo rabtaa in Somaliland gorortan lagala halo goboladaa maqan waa inuusan misla farisan umadaanaa qalbii jab kuridin hadii maaantay Somaliland loo ogolaado in wadaa hadal lagala galoo sool sanaag maxay ragii dhintay kudhintee waa su.aal
libaaxa tuka raq says:
waxay ku dhinteen waa mom dameer dilay waayo dhul aanay lahayn ayay ku dhinteen somali landna dhulkeeda cidna ka ogalan mayso gardaro
wiil harti says:
c/weli gaas wuu fahmi waayay siyaasada uu muuse la ciyaarayo
wuxuu isu arkaa inay somaliland ku jabiyay dagaalka lkn meesha waxa taal arin intaaba ka weyn oo ah sidii puntland meesha looga saari lahaa
siyaasadu maaha wejiga muuqda ee waa wajiga qarsoon hdaad ku degdegtana waa guul darysanysaa
waxaa is weydiin mudan hargysa maxy usoo pandhigi weydy guulaha ay ka gaadhy dagaalada
halkaa waxd ka dareeemysa inuu jiro qorshe ka weyn dagaaalkan hada soconaya